“War orod waxaad tahay canug ooyaaye oo fuley ah.” ….(AQRISO tan kala qabsatay Ozil iyo Mourinho!!) – Gool FM
“War orod waxaad tahay canug ooyaaye oo fuley ah.” ….(AQRISO tan kala qabsatay Ozil iyo Mourinho!!)
(Europe) 02 Feb 2017. Mesut Ozil ayaa daaha ka rogay inuu mar Jose Mourinho ugu yeeray canug ooyaaye oo fuleey ah kaddib dagaal dhex maray labadooda mar la maray qeybta hore ee ciyaarta.
Xiddiga reer Germany ayaa saddex sano Bernabeu kala soo hoos shaqeeyay macallinka reer Portugal iyadoo uu waqtigaa kula guuleystay La Liga iyo Copa del Rey.
Yeelkeede, akhlaaqda shaqada Ozil iyo kaalintiisa ayaa waxaa su’aal galiyay Jose Mouirnho mar kaambiyo la maray ciyaarta kolkaa uu Ozil si caro leh ugu jawaab celiyay tababarihiisa.
“Mourinho wuu igu qeyliyay ‘Ma waxaad u maleynaysaa inay kugu filan tahay labo baas oo fiican aad dhibto? Ma waxaad aaminsan tahay inaad aad ugu fiican tahay inaad dagaal gasho ama xilfaaltan. Waxaad u maleynaysaa inaad aad ugu fiican tahay inaad ciyaari karto boqolkiiba konton. Ma garaneysaa sida ay u egtahay marka aad dagaal galeyso. Aan ku tusiyo aniga. ‘Intaa kaddib qolka dhar badelashada ayuu dhex socday iyadoo uu labada gacmood gadaal u xirtay afkana xirtay.”. Ozil ayaa sidaa ku qoray buugiisa ‘Die Magie des Spiels’ oo si taxane ah loogu qoro jariiradda Bild.
“Waan carooday waxaana ku qeyliyay inuu isaga garoonka aado uuna ciyaaro, maaliyada ayaan siibay lugihiisa ayaana ku tuuray. Waxaan u sheegay inuu maaliyada xirto uuna garoonka galo.
“Wuu qoslay Mourinho, ‘Durba ma is dhiibtay? Waxaad tahay fuleey. Maxaad dooneysaa inaad sameyso? Ma inaad gasho qolka qubeyska diiran aadna tinta soo dhaqato? Miyaad dooneysaa inaad kaligaa ahaato? Mise waxaad tusineysaa saaxiibadaada kooxda, taageerayaasha iyo anigaba waxa aad sameyn karto? Maad bilowdid ooyinta! Waxaad tahay canug ooyaaye ah, gal qolka qubeyska kuuma baahnin.’
“Waxaan soo qabsaday shukumaankeyga waana ag maray anigoon waxba ku oran isaga.
“Markii dambe waxaan dhaqamadeyda ka raali galiyay kabtanka kooxda Sergio Ramos iyo kooxda inteeda kale.”.
Ibrahim Afellay oo heshiiska u kordhiyay kooxdiisa Stoke City